यो देखेर कसको मन रुदैना होलार,कुन देशको के स्वार्थ छ यो युद्दमा ? निकै दुखद र हिर्दयविदारक यी २४ फोटोहरु सहित पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस् !::kamananews
यो देखेर कसको मन रुदैना होलार,कुन देशको के स्वार्थ छ यो युद्दमा ? निकै दुखद र हिर्दयविदारक यी २४ फोटोहरु सहित पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस् !
सरकारले आन्दोलन दबाउन ठुलो शक्ति प्रयोग गरेपछि सिरियाका जनता सबै सडकमा उत्रिन थाले । उनीहरुले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरिरहेका थिए भने अर्को तर्फ बसर आफ्नो पद जोगाउन राजनीतिक खेलमा व्यस्त देखिन्थे ।